Sanibonani bangani, kusayithi lethu Ukwenza imisho ngesiJalimane Kunezindatshana eziningi ezihlobene nayo. Abangane bethu abaningi bafuna sibeke izifundo zethu ekwenzeni imisho ngesiJalimane ngokulandelana.
Ngokwesicelo sakho, sibhale izifundo esizilungiselele ekwenzeni imisho ngesiJalimane, kusuka ku-zero kuye phambili, ngokulandelayo. Ungafunda izifundo zethu zaseJalimane ngamunye ngamunye, uqale esifundweni sokuqala.
Ukunikeza imininingwane emfushane ngokwenza imisho ngesiJalimane;
Ukwenza Isigwebo SaseJalimane Isihloko singesinye sezihloko ezibalulekile okufanele zaziwe ezigabeni zokuqala zokufunda isiJalimane esiyisisekelo. Ukuze kwakheke umusho, amagama emisebenzi ehlukene kumele ahlangane futhi akhe inkulumo ezwakalayo. Lapho kwakhiwa umusho, amagama anokulandelana okubizwa ngezakhi zomusho. Kungabonakala ukuthi izinto ezakha umusho zakhiwa ngegama elilodwa noma amaningi.
Umthetho othile wohlelo lolimi ubhekwa ngokwenza imisho ngesiJalimane. Okulingana nesiJalimane '' Hauptsatz '' Lapho isigwebo sizokwenziwa, isihloko sonke '' Subjeckt '', isenzo 'Isenzo' futhi uphikise '' objeckt '' isebenzisa simo. Ikakhulukazi ngesiJalimane, ukwakhiwa kwemisho eyisisekelo kwenzeka ngale ndlela, okungukuthi, isenzo sibekwe emgqeni wesibili.
Ngenhla Ukwenza imisho ngesiJalimane Ungafunda izifundo ngokulandelana. Siyethemba ukuthi uzozuza kakhulu ezihlokweni zethu ezichazwe ngesiTurkey ngokuqhathaniswa.
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-11 ezedlule, ngoJanuwari 23, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoFebhuwari 13, 2021.